India, Pakistan: Misosa ny fakan-tàhaka an’i Sania-Shoaib · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2010 6:37 GMT
Nanaitra ny vahoaka tany India sy Pakistana ny fifandroritan-kevitra momba ny fanambadian’i Shoaib Malik sy Sania mirza. Tamin’ny blitz-n'ny media, toy ny miatrika ‘version desi’-n'ny “papparazzi” ireo vahoaka avy ao amin'ireo firenena roa ireo raha araka ny fihazana, fanangonana sy famoahan'ireo fahitalavitra, gazety ary haino aman-jery izay mety ho vaova faran'ny bitika hitany momba io fanambadiana io.
Nivoaka indray avy tany am-batan'i Shoaib tany ny taolambalon'ny vadiny taloha, Ayesha Siddiqui ,efa voalevina ka tsy maintsy nisarahany am-pahibemaso mba hampitsaharana ny fifandroritan-kevitra. Notsoahin’ny fianakavian’i Siddiqui ireo fanendrikendrehana sy fitoriana azy tany India ary fanampiana mitentina 150 tapitrisa ropia no tambiny. Niteraka korontana teo anivon'ny hainoaman-jery ny fanaparitahana ilay tantara, ary azo antoka fa tsy tara koa ireo mpitoraka blaogy. Nirehidrehitra tamin'ny fomba fijery sy adihevitra ny tontolon'ny blaogy India sy Pakistana, ny sasany mieritreritra fa mariky ny fihavanana io, ny hafa kosa mihevitra io fanambadiana io ho loharanon-doza rahatrizay.
Syed Zaki Ahmed tao amin’ny Pak spectator nieritreritra fa làlam-barotra tsara ity fanambadiana ity sy ny resaka mikasika azy :
Ny blaogy They call me muslim manadihady ny anton'ny fanapahan-kevitr'i an’i Sania Mirza hanambady an’i Shoaib Malik:
Na dia izany aza anefa, Capricious miteny fa tsy ho tanteraka io fanambadiana io :
Saiky ho isan’andro dia misy vaovao tonga foana toy ny praiminisitra nandefa fanomezana manokana ho azy mivady mitohy any rehetra any ny fanakianana mivaivay sy manafintohina. Sunni Ulema Board, vondrona manampahaizana ara-pivavahana, ‘ dia voalaza fa namoaka fatwa’ (lalàna ara-pivavahana) momba an’i Sania sy Shoaib noho ny fiarahana sy fanaovana tokantrano-maso mialoha ny fanamasinana ny fanambadiana. Misy teny azo andikana an'io karazana fanambadiana io ao amin’ny twitter miaraka amin’ny tenifototra #shoania
Misy tatitra mitsaho fa ny nikah (fifanekena am-panambadiana) dia natao ny 9 aprily. Nefa tsy misy zavatra vita izany raha tsy hoe azo ny fanaiken'i Sania sy Shoaib. Toa manitatra ny fampahalalam-baovao hany ka toa mitohy misavoritaka ny mponina an-tapitrisany avy amin’ireo firenena ireo.